Tena misy ilay piratazy amelezana ny mpanohitra ny FAT | Hevitra MPANOHARIANA
Tena misy ilay piratazy amelezana ny mpanohitra ny FAT
2009-06-19 @ 22:13 in Ankapobeny
Araka ny tsikaritrareo mpamaky eto amin'ny Maharesaka...VETO dia niala ny lahatsoratra farany napetrako mitondra ny lohateny hoe: "Nahoana no tsy hananga-tsaina?". Tsara aloha ny manamarika fa tsy ny mpanoratra velively no nanala iny lahatsoratra farany, izay indro haveriko aminareo manontolo indray, iny fa fanafihana piratazy (sovoka an-tserasera no filazako azy manokana ataoko soso-kevitra rahateo) nahazo ny namana serasera saiky izy iray manontolo ka tratrany ihany koa ny blaogy.com iantranoako. Raha sanatria moa avy ny tsy fahatafavoahan'ny jentilisa.blaogy.com dia velomina indray ny jentilisa.blogspot.com izay efa nisy ahy ihany teo aloha.
Efa andro maromaro lasa izay no nisy nampita vaovao taty amiko fa misy vondron'olona (na firenena) manana tombotsoa manokana amin'izao mpanongam-panjakana ankehitriny izao, manakarama manam-pahaizana manokana amin'ny fisomparana vohikala avy any Shina roa tonta, Rosia ary Okraina hisompatra sy hamotika hatramin'ny farany mihitsy ny vohikala malagasy rehetra, na miteny vahiny na miteny malagasy, mamofopofona tsy dia fankasitrahana loatra ny FAT (Fahefana Avon'ny Tetezamita). Volabe tokoa no hanakaramana ireo manampahaizana manokana amin'ny fisomparana an-tserasera ireo (Hackers). Matanjaka loatra manko aty an-tserasera ireo mpanohitra ny FAT ireo ka lalana iray hitan-dry zareo hanitsiana ny lesoka ny gafy tsy misangy.
Tamin'ny nandraisako io hafatra io, izay nomeny ahy manokana mihitsy noho ny fitiavany mamaky ny bolongako ary tiany raha mba izaho no namoaka azy voalohany araka ny fahazoako azy, ka ankasitrahako azy indrindra io fihetsika io dia lasan'eritreritra avy hatrany aho nefa nisalasala ny amin'ny hamoaka azy eo no ho eo. Takina tanteraka tsy misy lahatsoratra mivoaka intsony ny Topmada, nisy fotoana nisy olana teknika tao amin'ny mydago saingy tafaveriny tsikelikely ihany ny very rehetra dia indro koa fa very tampoka ihany koa izay oasoratra faramparany teto anivon'ny namana serasera ka tafiditra amin'izany ny blaogy.com. Fifanandrifian-javatra ve sa porofon'ny tetika maty paika? Ireo aloha no tena fandehanako ary manaitra ahy avy hatrany raha ao misy zava-mitranga kely.
Momba ny Topmada manokana
Mampisalasala ahy ihany ny amin'ny Topmada izay tsy namoaka lahatsoratra vaovao intsony. Heveriko manko fa mety ho antony hafa fa tsy fisomparana no nahazo azy ankoatra ny hoe hitan-dry zalahy angaha ny tenimiafina novainy ka tsy tafidita intsony ny tompony nefa sarotra ho ahy manokana ny amin'izay lafin-javatra izay. Hevitro manokana dia nijanona avy hatrany ny mpandrindra raha vao nihaniroborobo ny fankahalana Frantsay nefa ny tenany aza Frantsay. Mety ho nanafintohina ho azy ihany ny fironan'ny toe-draharaha ka niatoany tsy hamoaka na inona na inona intsony. Tombatombana ihany anefa izany fa tsy fantatra izay tena zaamisy marina ary aharihariko ny filazana fa tombana ihany ny momba ny Topmada io.
Mampieritreritra ilay fetin'ny foloalindahy
Miverimberina amin'ny fahitalavitra vitsivitsy ny dokambarotra momba ny fetimpirenena sy ny fanentanana ny tokony hananganan-tsaina ho mariky ny fiandrianam-pirenena ary mifanindran-dalana amin'izany ny fetin'ny foloalindahy malagasy izay ankalazaina ny andron'ny 26 jona ihany koa. Fa nisarika ny saina ny nandre ny fanentanana natao ho toy ny fomba fiteny filalao amin'ny sarimihetsika nefa natao amin'ny teny frantsay. Angamba hitan-dry zareo tsy mahasarika loatra ilay teny malagasy rehefa nohenoiny ka dia ny tamin'ny teny frantsay (na notsoahina tamin'ny sarimihetsika vahiny mihitsy aza) no nentina nanaovana ny dokambarotra. Ry teny malagasy ô! fa inona ity atao anao?
Tsy maintsy mba taitra ihany ny tena amin'izany satria tiana nasongadina ny anjara toeran'ny tafika malagasy saingy ny teny frantsay no hitako nisongadina kokoa. Ny tena mandreraka manko dia ny fandrenesana vaovao maro samihafa, toy ny filazana fa vao nosoniavina mangingina ny fifanarahana teo amin'ny tafika malagasy sy ny tafika frantsay. Resaka fifamatorana akaiky kokoa eo amin'ny roa tonta no tena nifotoran'izany fifanarahana izany hisian'ny fifanampiana indrindra ny eo amin'ny fitaovana sy ny fiofanana bebe kokoa ho an'ny tafika malagasy ary ny takalon'izay kosa dia ny tafika frantsay irery ihany no miara-miasa amin'ny tafika malagasy. (Ô ry jentilisa a! sao dia ialahy miresaka tafika be loatra ity no isomparan'ny sasany an'ialahy e? Rehefa voasompatra leitsy dia miova lasy sady ataoko ity tehiriziko ny lahatsoratra tsy ho very e!).
Fa lasa aiza ny iray volan'ny teny malagasy?
Antony iray nanakanana ny mpandala ny ara-dalàna tsy hiditra eny amin'ny kianjan'Ambohijatovo ny filazana fa iray volan'ny ankizy izao ka tsy tokony helingelenina. Fihatsarambelatsihy ihany izany amiko saingy azy moa ny hery ankehitriny ka izay tiany io. Ny toa tsy mba misy milaza mihitsy dia ny fanginan'ny iray volan'ny teny malagasy tanteraka. Tena tsy henoko loatra izay antony fa raha ny fahatsapana amin'izao fotsiny dia ketraka ny mpandala ny teny Malagasy ny hanasongadina ao anatin'ny iray volana ny teny lalainy. Eo ihany koa ny fifalian'ny maro rehefa nolazain'ny minisitry ny FAT ny fiverenana ny teny ampianarana ho amin'ny teny frantsay ka akôry atao babak fa herim-bery maina ny mbola hampiroborobo azy. Saingy na eo aza izany hagagana izany tsy kivy tsy akory ny eto ka hilaza fa tsy hanoratra amin'ny teny malagasy intsony.
Ankasitrahana na dia izany aza ny ezaka nataon'ny fikambanana maro samihafa ny amin'ny fampiroboroboana ny teny malagasy mitondra ny kolontsaina malagasy nandritra izay taona maro izay na dia niato aza ny fanaovana azy tamin'ity taona ity. Amiko manokana dia toy ny vao maika nampibaribary ny famotehana ilay mari-piandrianana malagasy be mpankahala ny tsy mba nitakiana ny fankalazana ny iray volan'ny teny malagasy io, ary mampiharihary ihany koa ny fivakisan'ny fiarahamonin'ny mpandala ny teny malagasy noho ny firehana politika misy amin'izy ireo tsirairay avy. Tsy tsapanao avy amin'izany ve fa tena ambavaloza ny fiaraha-monina malagasy? Indro averiko eto indray ny lahatsoratra voafafa noho ny fisomparana, ary matokia fa raha sanatria voasompatra indray ity dia mbola azo apetaka indray noho ny fitehirizako ny lahatsoratra rehetra.
jentilisa, asabotsy 20 jona amin'ny 00:13 alina
Nahoana no tsy hananga-tsaina?
Niteraka adi-hevitra ihany ity fanentanana tsy hanangana ny sainam-pirenena ho amin'ny fankalazana ny 26 jona ahatsiarovana fahaleovantenan'i Madagasikara ity. Amin'ny ankapobeny manko, faneva manavaka ny firenena iraisan'ny Malagasy rehetra tsy tokony idiran'ny politika velively io fa na iza na iza mitondra, raha mbola io no ambaran'ny Lalampanorenana malagasy fa sainan'ny Malagasy dia io hatrany no atsangana ahafantarana fa an'ny Malagasy i Madagasikara raha ny tokony ho izy.
Tamin'ity taona ity anefa, rehefa nisy iny fanonganam-panjakana nandritra ny telovolana voalohany 2009 iny dia mandeha ny fanentanana fa tsy hananga-tsaina mihitsy ny mpandala ny ara-dalàna raha tsy miverina i dada. Lasa ny saina noho izany mieritreritra hoe mivadika politika indray ve noho izany ny fananganan-tsaina ka raha tsy tonga iny olona iny dia ny fanevam-pirenena no sanatria anehoana fahatezerana ho hitan'ny ambanilanitra? Hatramin'izay 7*7 = 49 taona nananana ny saina izay tsy nisy fanentanana tahaka izany koa nahoana tamin'ity taona ity no nisy indray izany?
Tamin'ny voalohany dia tsy nankasitrahako mihitsy ity fanentanana tsy hananga-tsaina amin'ny trano ity, saingy rehefa nijerijery teny rehetra teny aho dia hitako ny zavatra tadiavin'ireo mpanentana. Fantatra ihany manko fa tsy ireo mpandeha eny Ankorondrano ihany tsy akory no nanohitra iny fanonganam-panjakana, heverina fa fiverenana amin'ny fanjanahantany indray, iny noho ny fandraisana anjaran'i Lafrantsa tao anatiny sy ny nitadiavany tamin'ny fomba rehetra hanalana ny filoha Ravalomanana hatramin'ny fiandohan'ny taona 2002. Tsy voatery ho mpankasitraka ny filoha Ravalomanana ihany koa izay rehetra manohitra ny fanonganam-panjakana fa mba manana ny fireha-keviny ihany koa izy.
Teo amin'ny fijerena ny fanohanana sy ny fanoherana ataon'ny tsirairay teo amin'ny lafiny politika dia ny fihetsiketsehana an-dalambe ihany no refy amarana ny hamaroana na havitsian'ny mpanohana ny tsirairay. Miharihary anefa fa tsy izy ireo ihany no mankasitraka na manohitra fa tsy naneho ny heviny kosa ireo izay mbola manan-javatra atao hamelomany tena ka tsy afaka mandeha amin'ireny fihetsiketsehana ireny velively. Eo ihany koa ny tahotra sakoroka izay mety handratra na hahafaty ny tena. Izaho manokana ohatra dia miserana isaky ny Asabotsy atoandro mialoha ny hamonjena asa eny amin'ny Auditorium no ataoko hanehoako ny fanoherana ny fanonganam-panjakana nisy teto Madagasikara. Hevero amin'izany ny fifandimbiasan'olona mandeha amin'ny hetsika sahala amin'ireny.
Hetsika an-trano, aseho amin'ny mpiara-monina noho izany ilay tsy fananganan-tsaina amin'ny trano mandra-pihavin'i dada. Ny manodidina anay akaiky ohatra dia efa niharihary ny fanohanany ny TGV sy ny tsi-fiovan-keviny, mazava loatra raha saiky mijoro isan-trano ny sainam-pirenena malagasy. Rehefa jerena anefa amin'izao fotoana izao ny manodidina somary velabelarina kokoa dia hita ihany koa fa maromaro ihany ny trano tsy mananga-tsaina, fa tsy fantatra raha hanangana ihany rehefa kelikely. Izahay kosa efa nivonona ny tsy hananga-tsaina mihitsy raha mbola tsy tonga i dada, soa ihany fa miray hevitra amin'ny ankapobeny ny ato an-trano amin'io lafiny iray io, na dia fantatra fa sarotra aza izany fahatongavany izany tsy misy gidragidra. Tsy afeninay rahateo ny tsy fankasitrahanay ny fanonganam-panjakana.
Moa ve tsy fanompoana olona iray izany miandry olona iray izany vao mananga-tsaina? Tsarovy fa tsy hoe olona ihany Ravalomanana fa filoham-pirenena voafidy ihany koa; izy no solontenan'ny firenena ara-dalàna rehefa misy ny fivoahana mankany ivelany. Efa nolazaina teo ihany koa fa tsy niafina mihitsy ny fandraisana anjaran'i Lafrantsa tamin'ilay fanonganam-panjakana, izy anefa no nanjanaka an'i Madagasikara koa dia noraisina avy hatrany fa fanjanahana indray no nataony tamin'ny fametrahana olona zary lasa saribakoly azony lalaovina sy baikobaikoana hitantana ny firenena. Izay no antony tsy ilàna mananga-tsaina amin'ny trano izany : satria zanatany i Madagasikara!
Na izany na tsy izany, tsy mitaratra velively ny safidin'ny tsirairay ny fananganana na tsia io sainam-pirenena io. Raha mitsangana eo amin'ny trano iray manko ny saina tsy midika izany fa mpanohana ny FAT avokoa ny olona afaka mifidy ao amin'io trano io, etsy ankilan'izany ihany koa sarotra ny ilazana fa raha tsy mitsangana amin'ny trano iray ny sainam-pirenena dia manohitra ny fanonganam-panjakana avokoa ny olona afa-mifidy ao. Misy ihany koa ny faritra, toa an'i Manjakaray ohatra, voatery mananga-tsaina avokoa ny rehetra noho ny tahotra fandrao hotafihin-dry zalahy raha mandà hanao izany; faritra mafana manko ireny ka aleo mitandrina ihany.
Vaovao iray toa tsy mba misy milaza, tsy azoko mihitsy, tsy misy ve ny mahatsikaritra? Efa andro maromaro manko izay dia taitra ny tena fa mazava dia mazava ny feo eo amin'ny FM100.80, ary ny teo aza no mafy faneno indrindra miohatra amin'ny fampielezam-peo hafa. Eo manko no andraisana ny feon'ny radio mada (radio tsy miankina) teto Antananarivo, izay radio nandray anjara mavitrika nandritra ny roa voalohany taorian'ny fanonganam-panjakana nisy teto madagasikara. Nohenoiko ka lasa ny radiom-panjakana fantatra amin'ny hoe radio nasionaly malagasy indray no feo eo. Navadibadiko teo akaikikaiky rehetra teo ny maridrefy ka akory ny hagagako fa maridrefy lava dia lava no nalainy. Inona no dikan'izany? Mihevitra ve izy ireo fa tsy ho tafaverina amin'ny toerany intsony ny radio mada sa anisan'ny fomba hanakanana amin'ny endriny rehetra ny hiverenan'ity radio ity izany fihetsika izany? Ny tena mahavariana dia tsy mbola nandre ny fitenenana io fangalarana maridrefy io velively aho ka soratako aloha!
Ahemotra ny fanondrotana ny karaman'ny miaramila sy ny zandary!
Araka ny loharanom-baovaoko dia nahemotra ho amin'ny volana jolay indray fa tsy ho ity mialoha ny fankalazana ny fetim-pirenena sady fetin'ny foloalindahy ity indray ny fanondrotana ny karama sy ny tambin-karaman'ny miaramila sy ny zandary; tsy misy resaka mihitsy kosa indray moa ny an'ny polisim-pirenena mikasika ity fanondrotan-karama sy tambin-karama ity.
Nampanantenain'ny PHAT fa hasondrotra manko io karama io saingy tsy tanteraka moa izany ny amin'ity volana jona ity. Nihevitra ihany aho fa ny hampazoto ny mpanao fanamiana tsy hifampitsitsy amin'ny mpanao fihetsiketsehana hamerenana ny ara-dalàna no anton'iny fampanantenana iny ary efa nandrasanay tokoa na ho tafasondrotra na tsia ilay karama ary dia izay aloha no reko amin'izao fotoana izao. Hiteraka fahatezerana amin'ireo mpanao fanamiana sy mpitam-piadiana ireo ve izany toe-javatra izany sa hiaritra kely aloha ry zalahy?
Eto isika dia hitodika kely indray hifanazava resaka, ny miaramila sy ny zandary ihany no nampanantenaina fisondrotana tamin'ny telo toko mahamasa-nahandro fa tsy tafiditra ny polisy. Inona no antony? Itarainan'ireo roa voalohany fa nomen'ny filoha Ravalomanana tombondahiny manokana ny polisy tamin'ny fanondrotana ny karaman'izy ireo ho Ar200 000 nefa tsy nisy resaka ny an'ny miaramila sy ny zandary koa mitaky ry zareo mba hifanahantsahana amin'ny an'ny polisy ihany koa ny raisin'izy ireo. Raha jerena amin'izao tokoa dia toa rariny ny fitakiana saingy fijery mitongilana izany fomba fijery izany ary mikimpy eo anoloan'ny zavamisy. Inona izany zavamisy izany?
Hatramin'ny ela dia iantohana trano ipetrahana sy fitafiana iasana ny ao amin'ny miaramila sy ny zandary. Tsy mandoa hofantrano noho izany ireo vondrona roa ireo. Tsy mba manana izany tombotsoa izany velively anefa ny polisy fa mitady ny trano ipetrahany sy manofa, ary ny fanamiana anaovany ireny dia ry zareo ihany no miantoka azy. Fantatrareo tsara anefa hoe tahaka ny ahoana izany hofantrano an-tanan-dehibe izany dia azo vinaniana ihany koa ny fahavoazana lehibe mahazo ny polisim-pirenena. Noho izany dia fampitovitoviana lenta ny telo tonta ihany ilay fampankarana toa nidangana tampoka azon'ny polisy nandritra ny fitondran-dRavalomanana nefa dia niteraka fialonana teo amin'ny miaramila sy ny zandary. Fanazavazavana tsotsotra ihany io fa anjarantsika no mamakafaka.
Efa nahita tamin'ny gazety mpanohana ny FAT ihany koa isika fa misy ny fampanantenana ny hanondrotana ny karaman'ny mpiasam-panjakana rehetra amin'iny volana jolay iny. Fampanantenana poak'aty ve? raha tontosa manko izany ahiana ny nisian'ny fanaovana "planche à billets" nefa dia hampihena be dia be ny sandan'ny vola malagasy indray izany ka tsy ho amin'ny tombotsoan'ny mpiasa velively. Azo tontosaina avokoa manko ny zavatra rehetra fa ny fiantraikany rehefa avy eo ihany no tena manandanja fa tsy ilay fihetsika velively.
jentilisa, alarobia 17 jona 2009 amin'ny 12:00
asa raha efa nandalo i Hery nahita ity lahatsoratr'i jentl ity, fa omaly dia nametraka fanontaniana toa anao i mangamaso hoe nankaiza ny lahatsoratra taloha teo. I Hery moa tany @ twitter sy facebook dia efa namerimberina fa nisy attack DOS ny serveur ka nangataka aza izy hoe izay rehetra nisoratra anarana t@ serasera t@ 17 juin dia iangaviana mba hamerina izany satria simba tao daholo izany rehetra izany.
Ka mba hanala ny ahiahinao dia aleo averiko ihany ny valin-tenin'i Hery ho an'i mangamaso (fa nony nahazo fanazavana i mangamaso dia nesoriny ny lahatsoratr nisy ny valim-panontaniana) saingy soa fa voatahiriko ka dia apetrako eto ho anareo rehetra sendra tratra izao tsy fidiny izao :
Nampidirin'i ikalamako @ 22:34, 2009-06-19 [Valio]
tsy ahiahinao moa zany fa ahiahin'izay tratra e :-)
Nampidirin'i ikalamako @ 22:41, 2009-06-19 [Valio]
Tao amin'io serablog io mihitsy aza no nahitako soratra hoe hijacked sa izaho no namaky hainagana loatra?
Nampidirin'i jentilisa @ 00:04, 2009-06-20 [Valio]
Jereo eto ny atao hoe attaque DDOS
Nampidirin'i Hery @ 08:34, 2009-06-20 [Valio]
Dia manohy ny fisaorana hatrany anao amin'ny zava-bita, dia ny fanomezana vaovao izany.
Nampidirin'i Mitohy ny tolona @ 23:14, 2009-06-22 [Valio]